TPolev Tu-124 FSX SP2 & P3D - Rikoooo
Downloads 10 734
Mpanoratra: SCS & Samdim Design Group
Amin'ny fomban-draharahan'ny fiaramanidina Rosiana, ity ny Tupolev TU-124, modely tsara tarehy miaraka amin'ny feo mahazatra. Tsy misy VC (fiaramanidina virtoaly) fa tsy ny zava-dehibe indrindra, raha ny marina, ity fanampiny ity dia manolo-tena ho an'ny tontolon'ny 2D izay tena feno, tsy maintsy mianatra ny torolàlan'ny tontonana ianao mba hifehezana ity fiaramanidina ity ary Fitsaboana! Misy sary telo: Aeroflot 60s, Aeroflot 70s sy CSA (Ceskoslovenske Avialinie)
Ny Tupolev Tu-124 (Code NATO: Cookpot) dia fiaramanidina sovietika sovietika nahavita nitondra mpandeha 56. Natomboka tamin'ny 1962, natsangana tao amin'ny 165 kopia.
Noforonin'ny orinasa Tupolev, noforonina mba hahafeno ny fangatahan'i Aeroflot ho an'ny mpamonjy aina manoloana ny Ilyushin Il-14. Mivoatra avy amin'ny Tupolev Tu-104 miditra an-dàlambe, toa tahaka ny kely kokoa ny azy io, sarotra ny manavaka lavitra be, satria ny rivotra farany dia tafiditra ao anatin'ireo elatra. Saingy tsy teknika tanteraka ny kopia. Ny Tu-124 dia manana fanatsaràna marobe toy ny parachute mpandroba ho an'ny filalaovana fitsaboana na amin'ny rindrina marefo, kodiaran-drivotra ambany ho an'ny tany amin'ny rindrina mihetsiketsika. Izy koa dia nitondra solika ho azy, satria izy ireo no fitaovam-piadiana madinidinika voalohany nampiasaina.
Tsipiriany momba ny pananana 2D miaraka amin'ny sary